Xiaomi Mi Max ဖုန်းမှာ CM13 ROM တင်ယူနည်း
1:13 AM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
Xiaomi Mi Max ဖုန်းကို CM13 ROM တင်သုံးချင်တဲ့ ညီအကိုများအတွက်
အဆင်ပြေမယ့် ဒေါင်းလော့လင့်နဲ့ တင်ယူနည်းကိုပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Xiaomi Mi Max ဖုန်းကတော့ MIUI7ဖြင့် တာထွက်လာတာပါ
တကယ်လို့သင့်ဖုန်းမှာ နောက်ဆုံး ဗားရှင်း Marshmallow 6.1 ဖြင့်
လန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CM13 ROM ကို တင်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Root Access ရရှိထားပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်။
၂။ CWM & TWRP Recovery တစ်ခုခုထည့်သွင်းထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။
၃။ Nandroid Backup တစ်ခုပြုလုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ဘက်ထရီအားသည် အနည်းဆုံး 70% ရာခိုင်နှုန်းရှိရပါမည်။
၅။ CM13 ROM for Xiaomi Mi Max
ယခုဖေါ်ပြ Custom Rom Flashing Guide သည် Official အတိုင်းလမ်းညွှန်ပေးထားခြင်း
ဖြစ်ပါသည်၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ရှိသော် လုံးဝတာဝန်မယူပါ။
အထူးပြောကြားလိုတာက ဒီ Custom Rom တင်သွင်းနည်းသည် အတွေ့အကြုံ
အလေ့အထ ရှိသူများအတွက်သာ ပိုသင့်တော်ပြီး တစ်ခါမှ အလေ့အထမရှိတဲ့သူများ
အနေဖြင့်တော့ အမှားတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တာကြောင့် စမ်းသပ်ထည့်သွင်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါရန်
ဖေါ်ပြပါ လမ်းညွှန်သည် ပြည့်စုံမှု မပြည့်စုံမှုထက် Custom Rom တင်ယူရန်အတွက်
Download Xiaomi Mi Max CM 13 ROM
ROM (Password: 7yqe)
Custom Rom Firmware တင်နည်း
၁။ ပထမဆုံး မိမိဖုန်းမှာ CWM & TWRP Recovery များ
၂။ ဖုန်းကို Nandroid Backup ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ
၃။ CM13 ROM for Xiaomi Mi Max ကိုဒေါင်းလော့ရယူပြီး
SD Card သို့ Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။
၄။ ဖုန်းကိုပါဝိတ်ပြီး Volume Up + Home + Power များကိုတွဲနှိပ်ပြီး
Custom recovery mode သို့ဝင်လိုက်ပါ Custom recovery mode တွင်
Wipe Data/Factory data reset, Wipe Cache များကို ရှင်းထုတ်ပေးပါ
ပြီးရင် Advance > ကိုနှိပ်ပြီး Wipe Devlik Cache များကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။
၆။ Custom Recovery Mode တွင် Install Zip > Choose Zip from SD card >
သွားလိုက်ပြီး CM13 ROM ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီး Flash ပေးလိုက်ပါ၊
Google Gapps ကိုလည်း ထပ်တူ Flash လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၇။ ပြီးရင် Advance > ကိုနှိပ်ပြီး Wipe Devlik Cache များကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။
၈။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Main menu သို့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါ။
၉။ "Reboot system now" ကိုနှိပ်ပေးပြီး ဖုန်းကို Reboot ချလိုက်ပါ
ပါဝါပွင့်ပြီးပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ CM13 ROM လေးလန်းနေပါလိမ့်မယ်။
1:27 AM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
window 10 သမားများအတွက် activator
Get the zipped file from here - KMSPico 10.1.5
Credit by ..www,markspcsolution.com
1:22 AM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
ဒါလေးကတော့ Microsoft Office product များကို activate လုပ်ပေးမှာပါ
Get the Zipped folder from here Link 1 or Link 2
Double click on the file KMSPico 10.1.5.exe to install the activator.
Now find either KMSPico/ AutoPico from your Start Window and click on it.
If your product is activated, you will see the message - Product Activated
10:10 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
video လုပ်တဲ့ အခါမှာ တော်တော်မိုက်ပါတယ် pro version မှာ video length က unlimited ပါ
နောက်ဆုံး version မို့လို့ ယူကြပါ
ဘာမှ မခံထားပါ လိုသလို ယူပါ ဒေါင်းရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်
10:01 PM mc bay gyi(သစ်တော)2comments
ကျွန်တော် မအားတာတော်ကြာသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ အခု ပြန်တင်ပါပြီ
ဒီ Game က ios မှာ ရော android ရော တော်တော် နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်
လိုချင်ရင် အောက်မှာ ယူပါ
အပစ်အခက်ဝါသနာပါသောသူငယ်ချင်းများအတွက် Sniper Fury ဆိုတဲ့ Action Game ကောင်းလေး တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Game လေးထဲမှာတော့ မိမိဟာကွန်မန်ဒိုတစ်ယောက် အနေနဲ့ ရန်သူတစ်ဖွဲ့များကို တစ်ကိုယ်တော် တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ရန်သူတွေရဲ့ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေလုပ် တဲ့ စခန်းတွေအထိသွားရောက်ပြီး ပစ်ခက်ချေမှုန်းရမယ့် Game ပုံစံမျိုးပါ။ နောက်မှာမှာ ပိုပြီးခက်ခဲလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်းမပူပါနဲ့ Hack ထားပြီးသားဖြစ်လို့ လက်နက်ကောင်းများကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူပစ်ခက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shoot တွေကိုရိုက်ပြထားပါတယ် ဗျာ။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Pes 2015 apk and Data
7:36 PM mc bay gyi(သစ်တော)5comments
ဒါလေးကတော့ Pes 2015 apk and Data
PES 2015 Apk - http://goo.gl/nt0ao9
Data APK - http://goo.gl/8gyiRc
iOS 8 တွင် ZawGyi Font အလှ လေးတွေထည်.ကြမယ်
10:18 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
iOS 8 တွင်မြန်မာဖောင့် အလှလှလေးတွေကို အသုံးပြုချင်သော iOS User တို့အတွက်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။Zawgyi Flower Font ကို သွင်းရန်အတွက် Anyfont ကို install လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။AnyFont ကို $1.99 ဖြင့်ရောင်းထားသော်လည်း ကျွန်တော် ဘော်ဘော် တို့အတွက်ဝယ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် APPLE ID အကောင့် ကို အသုံးပြု့ပြီး AnyFont ကို Free ရယူပါ။
Setting > General > iTunes & App Store ကိုဝင်ပြီး မိမိ တို. ၏ Apple ID ကို Sign Out လုပ်ပေးပါ။
Sign Out လုပ်ပြီးပါက ကျွန်တော် ၏ Apple ID ကို Sign in ပြန်လုပ်ပေးပါ။
ID = myanmaridroidappfree@gmail.com
PW = Komin27Ios
( K ) နှင်. ( I ) သည် စာလုံးအကြီးဖြင်.ရေးရပါမည်။ Password ကို မမှားရန် သတိထားပေးပါ။
Apple Store ကို ဝင်လိုက်ပါ။ Search တွင် AnyFont လိုရိုက်ပြီးရှာပါ။ ရှာပြီးပါက install လုပ်ပါ။install လုပ်ပြီးပါက အောက်က လင်.ထည်းက မိမိ တို. ကြိုက်နှစ်သက်၇ာ ဖောင်.စတိုင် ကို ရွေးပြီး install ပါ။
ZawGyi Flower Font
Font Download Link ကို ဝင်ပြီးပါက အောက်ကပုံလေးထည်းက အတိုင်း ဒေါင်းလုဒ် နေရာ ကို ဝင်ပါ။
Open in "AnyFont" ကို ဆက်ဝင်ပေးပါ။
ZawGyi-One ကို ရွေးပေးပါ။
ZawGyi Flower .ttf လိုရေးထားသော ပုံလေးကို လက်ဖြင်.တို.ပေးပါ။
install လုပ်ပေးပါ ခင်ဗျ။
Post By KO MIN
10:16 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..Facebook Page လေးကိုတော့ LIKE ပေးသွားပါဗျာ..လိုအပ်တာတွေကိုလည်း C-box မှာ မှာကြားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
Visual Studio 2012 Ebook ‌
9:46 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
Sry အကိုရေ ကျွန်တော်မတက်တာကြာပြီ မို့လို့ မကြည့်မိဘူး တင်ပေးလိုက်ပြီ
This expert Wrox guide is exactly what you need to get up and running quickly with Visual Studio 2012. Written byaMicrosoft Visual C# MVP, it guides you through the exciting features of the integrated development environment (IDE)such as code snippets, refactoring, and patternswhile also showing you how to maximize all the latest tools and significant improvements to the technology. The in-depth coverage as well as numerous illustrative examples goalong way to get you up to speed so you can start using Visual Studio 2012 right away.
Download: Professional Visual Studio 2012
Valentine's Day အတွက် Frozen Keyboard
9:11 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
Valentine's Day အတွက် Frozen Keyboard လေးကို အမှတ်တရအနေနဲ့
Developer ကို ပာန်ဇော်ဦး မှ ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Valentine's Day အတွက် Love keyboard Design လေးပါ။
>>>>>>> ဒီကနေလည်းယူလို့ရပါတယ် <<<<<<<
Credit : ကိုပာန်ဇော်ဦး
ကျတော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုပာာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်
Sony Xperia Z1 C6903 ကို Root
9:09 PM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
Sony Xperia Z1 ကို Root လုပ်ချင်သူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
>>>>>>> Fastboot & adb.zip <<<<<<<
>>>>>>> Boot_en.img <<<<<<<
>>>>>>> UPDATE-SuperSU-v1.91.zip <<<<<<<
1. Device ကို Unlock Bootloader လုပ်ရပါမယ်။
ဒီလင့်ကနေ ၀င်ပြီး Bootloader code တောင်းလိုက်ပါ။
2. Fastboot & adb.zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။
ဖြည်လို့ရတဲ့ Fastboot & adb Folder ထဲကို Boot_en.img ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Folder ကိုဖွင့်ပြီး SHIT + RIGHT CLICK နှိပ်လိုက်ပါ။
open command window here ကို နှိပ်လိုက်ရင် Box တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒီ Box ထဲကို fastboot.exe -i 0x0fce getvar version လို့ရိုက်ထည့်ပြီး
enter မခေါက်ခင် Phone ကို volume up ဖိထားပြီး ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
Phone မှာ မီးပြာလေးလင်းလာရင် volume up လွှတ်ပြီးချထားလိုက်ပါ။
ပြီးရင် enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ကပုံ အတိုင်း Finish ပြရင်
fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x လို့ရိုက်ထည်ပြီး x ရဲ့နောက်ကနေ
Unlock Bootloader လုပ်တုန်းကရထားတဲ့ code ကိုရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
Finish ပြရင် fastboot flash boot boot_en.img လို့ထက်ရိုက်ထည့်ပြီး
Finish ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ ရပါပြီ။
* နံပတ်3အဆင့်ကိုသွားပါမယ်။ *
3. Phone ကို ပါဝါဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
auto အလုပ်လုပ်နေပါမယ် ... လွှတ်ထားပေးလိုက်ပါ။
ပြန်တက်လာပြီဆိုရင် step to step ... Home Screen မြင်ရတဲ့ထိသွားလိုက်ပါ။
Home Screen မြင်ရပြီဆိုရင်
Setting >>> More >>> about device >>> Built number ကို7ချက်လောက်နှိပ်
Developer Option ပေါ်လာပါမယ်။
Developer Option ထဲက USB Debugging ကို on ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Phone ထဲကို UPDATE-SuperSU-v1.91.zip ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ထည့်ပြီးရင် Phone ကို power ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် power ကိုဖွင့်ပါ ... vibrate တုန်လာတာနဲ့ volume up ကို ဖိထားပေးလိုက်ပါ။
Recovery Mode ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။
Recovery Mode ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ UPDATE-SuperSU-v1.91.zip ကို
ရှာပြီး Flash ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Reboot System Now လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Root Accept အပြည့်အလုပ် လုပ်ပေးတဲ့ SuperSU လေး
သင့် Phone ပေါ်တွင် ရောက်နေပါပြီ။ :)
လေကြောလေးတော့ နဲနဲရှည်သွားမိပြီ။ :D
အဲ ... 114.2.A.0.290 Firmware မှာ ဒီအဆင့်နဲ့တင် အိုကေသွားပေမယ့် 114.2.A.1.136 မှာတော့
Bluetooh, Network, Tethering စသည်ဖြင့် Error တွေတက်နေမှာပါ။
( တခြား Error တွေလည်းရှိနေမှာပါ )
အဲတော့ Error တွေကို ဒီလိုရှင်းကြမယ်......
Flash Tool ကို Run လိုက်ပါ မိုးကြိုးပုံလေးကိုနှိပ် Flash Mode ကို Select လုပ်ပြီး Ok ကိုနှိပ်
ပြီးရင် 114.2.A.1.136 Firmware ကို Select တချက်နှိပ်
ဆက်ပြီး ညာဘက်က Exclude အကွက်ထဲက BOOTBUNDLE နဲ့ KERNEL ကလွဲရင်
ကျန်တဲ့ PARTITION, TA, FOTA, BASEBAND, SYSTEM, ELABEL ရယ်ကို အမှန်ခြစ်ခြစ်ပေးပါ။
ပီးရင် Flash ကိုနှိပ် ဖုန်းကိုပါဝါပိတ် ခဏလောက်စောင့်ပါ
Wait For Flashmode လို့ ပေါ်လာရင် Vol Down ခလုတ်ကိုဖိပြီး ကွန်ပြူတာမှာကြိုးထိုးပေးလိုက်ပါ။
အစိမ်းရောင်လိုင်းလေးပြည့်သွားပြီး Flash Tool မှာ Please unplug and start your phone လို့ ပေါ်လာရင်
ပြန်တက်လာရင် Error ကင်းကင်းနဲ့ SuperSu လေးကို သုံးလို့ရပါသွားပါပြီ။ :)
Root Apps တွေသုံးလို့ရပေမယ့် System ကိုဝင်ပြင်တာမျိုးတော့ မရပါဘူး။
System ကို ၀င်ပြင်တာမျိုးလုပ်ချင်ရင်တော့
Recovery ကနေ UPDATE-SuperSU-v1.91.zip ကို ပြန် Flash ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ok သွားပါလိမ့်မယ်
Android ဖုန်း တစ်လုံးကို Remote Control အဖြစ် အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာကို ထိန်းချူပ်ခြင်း
12:50 PM Aung Myo Kyaw 1 comment
မိမိသည် Android ဖုန်း တစ်လုံး လက်ဝယ်ထား၍ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနေ သူ ဆိုလျှင် ဤ ပိုစ့်ကို ဖတ်ရှုရန် အထူး တိုက်တွန်းလိုပါသည်။နည်းပညာ နှင့်အနည်းငယ် ရင်းနှီးကျွှမ်းဝင်သော သူတစ်ယောက် အဖို့အထူးအဆန်း ဖြစ်မည် မဟုတ်မှာ သေချာသော်လည်း သုံးစေချင်သည့်အတွက် ဤ ပိုစ့်တွင်Beginner များက အစပြုလုပ်တက်စေရန် အထူးတလည် ကြိုးပမ်းထားပါသည်။
Castle of Illusion V1.1.0 APK+DATA
2:27 AM mc bay gyi(သစ်တော) No comments
ဒီကောင်လေးကို မြင်ရင်တော့ သိမှာပါနော်
DOWNLOAD APK+DATA:CLICK HERE